Abaalmarinta nabada ee Nobel oo si wadajir ah loo guddoonsiiyay Malala iyo Kailash | sowora
← Young Somali women find experience, community in startup boutique
Parents in praise of FGM as 27 girls undergo the ‘cut’ →
Abaalmarinta nabada ee Nobel oo si wadajir ah loo guddoonsiiyay Malala iyo Kailash
Posted on December 12, 2014	by sowora
Gabadha u dooda arrimaha waxbarashada ee dalka Pakistan Malala Yousafzai iyo ninka u dooda xuquuqda carruurta dalka Hindiya Kailash Satyarthi ayaa si wadajir ah loo guddoonsiiyay abaalmarinta nabada ee Nobel.
Guddiga abaalmarinta Nobel ayaa ku tilmaamay inay yihiin dadka sanadkan la guddoonsiiyay “Homuudka Nabada”. Ms Yousafzai ayaa sheegtay in ay u taagan tahay xaqa carruurta la iloobay ayna codkooda kor u qaado si loo maqlo.
Mr Satyarthi ayaa sheegay in helitaanka abaalmarinta ay u tahay fursad weyn si uu sii wado dadaalkiisa uu ugaga hortagayo addoonsiga carruurta.
Guddoomiyaha guddiga abaalmarinta Nobela ayaa guddoonsiiyay Ms Yousafzai iyo Mr Satyarthi abaalmarintan iyadoo uu goobjoog ka ahaa boqor Herald V ee dalka Norway.
Malala ayaa waxa ay ahayd 11 sano jir markii ay bilowday inay u doodo xuquuqda carruurta gaar ahaan gabdhaha kadib markii ururka Daalibaan ee dalka Pakistan uu ka mamnuucay gabhaha inay iskuulada aadaan. Hase yeeshee gabadhan ayaa waxaa dhaawac uu ka soo gaaray madaxa kadib markii labo nin ay isku dayeen inay dilaan.
Labo sano kahor ayaa Malala la geeyay dalka Ingiriska si loogu soo daweeyo waxaana qoyskeeda ay haatan ku nool yihiin magaalada Birmingham halkaa oo ay wax ku barato.
Ms Yousafzai oo ah 17 sano jir ayaa noqotay qofkii ugu da’ yara ee abid ku guuleysta abaalmarinta Nabada ee Nobel waxaana la sheegay in ay dooneyso inay mar uun madax ka noqoto dalkeeda Pakistan.